Aqalka sare oo lacag ugu deeqay dadkii ay sameeyen Duufaanta – Kalfadhi
Guddiga joogtada ee aqalka sare ee Baarlamaanka Soomaaliya oo fadhi ku yeeshay caasimadda Muqdisho ayaa ka dooday wadciyada dhinaca amaanka iyo sidii gacan looga geysan lahaa gargaarka bini aadamnimo dadkii ay saameeyen daadadkii xoogana eek u dhuftay degaanada Somaliland,Puntland iyo Jubaland.
Bayaan kasoo baxay fadhiga guddiga ayaa loogu baaqay dhinacyada ku hardamaya Tukarakh in si sharuud la ‘aan ah ay xabadda u joojiyaan iyagoo u tiuraya dadka Sooman.
Kulanka inta uu socday waxa ay guddiga gargaarka bini aadamnimo ee aqalka sare ugu daqeen markii labaad $50,000 dadka waxyeeladu kasoo gaartay daadadkii ku dhuftay gobolo kamid ah Jubooyinka iyo gobolka Awdal ee Somaliland.
Senator Cabdi Axmed Dhuxulow ayaa sheegay in lacagtaan ay u qeybiyeen 3meel oo $20,000 kamid ah ay qaadan doonto Jubaland,halkan Somaliland sidoo kale yeelan doonto $20,000 iyo Puntland oo loogu deeqay $10,000.
Aqalka sare ayaa bishii tagtay waxa ay sidaan oo kale lacago ugu deeqeen dadka reer Beledweyne oo wabiga uu kusoo fatahay
M\_weyne Farmaajo oo xilka ka qaaday Gudoomiyaha Maxkamada sare ee Dalka